MR MRT: သိမ်မွေ့သောလမ်း (၉)
စတုတ္ထနေ့ - အာနာပါနသတိပဋ္ဌာန်
(ဟောင်ကောင်၊ ၉ အောက်တိုဘာ ၁၉၉၇)
ဆရာကြီး။ ။ ဒီနေ့ တွေ့ကြပြန်ပါပြီ်။ ဒီနေ့ညနေ ဟောပြောမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ လေကိုရှူသွင်းခြင်း၊ လေကိုရှိုက်ထုတ်လိုက်ခြင်းအပေါ်မှာ အာရုံစူးစိုက်ထားခြင်းအကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အစဉ်အလာ အားလုံးမှာ အသိများတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ဘာဝနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း ရှုမှတ်နည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကို ကျင့်သုံးပြီးတော့ ဘုရားရှင် သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်အလင်း ပေါက်မြောက်ခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒီနည်းဟာ ဘာကြောင့် ဒီလောက်ထိ အရေးပါနေရသလဲ . . . ကြည့်ကြရအောင်။
ဒီ ကမ္မဋ္ဌာန်းနည်းမှာ နိုးကြားမှုနဲ့ သတိကို ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဖို့ပဲ အလေးပေးထားပါတယ်။ အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်း အသက်ရှူမှုဟာ အလိုလို ဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ အလိုလို ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အသက်ရှူမှု အပေါ်မှာ အသိနဲ့ သတိကို ဖွံ့ဖြိုးအောင် ကြိုးစားနေကြတာပါ။ သတိရှိမှုကို အလေးပေးထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဒီနည်းကို ကျင့်သုံးပြီဆိုရင် ကိုယ်ထဲမှာ စိတ်ထဲမှာ ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ဖြစ်သမျှကို သိနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဖြစ်ပေါ်နေသမျှကို သိဖို့၊ သတိထားဖို့၊ အာရုံစိုက်ဖို့ပဲ လေ့ကျင့်ရပါမယ်။
ဒါကြောင့် အတွေးအကြံတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရင် သူတို့ အနှောင့်အယှက်တွေ အဟန့်အတားတွေလို့ သဘောမထားပါနဲ့။ တွေးနေတာကိုပဲ သိလိုက်ပါ။ အသံကြားရင် ကြားတယ်လို့ပဲ သိပါ။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ခံစားမှု အမျိုးမျိုး တွေ့ကြုံခံစားရတယ်ဆိုရင် တွေ့ကြုံခံစားရတယ်လို့ပဲ သိပါ။ ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေကို သိပါ။ ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေကို သိမှတ်လိုက်ပြီးရင် အသက်ရှူမှုဆီ ပြန်လာပါ။
ဒီ ကမ္မဋ္ဌာန်းနည်းကို ကျင့်သုံးနေတဲ့ အခိုက်အတန့်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲစရာ မလိုပါဘူး။ ဘ၀တိုက်ပွဲတွေ လုံလောက်ပါပြီ၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းခွင်မှာ တိုက်ပွဲမဆင်ပါနဲ့လို့ ကျွန်တော် ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဘာဝနာ ကမ္မဋ္ဌာန်းဟာ လွတ်မြောက်မှုကို တွေ့ကြုံခံစားဖို့၊ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ဖို့၊ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးမှုကို ခံစားဖို့၊ ဆင်းရဲဒုက္ခက လွတ်မြောက်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္မဋ္ဌာန်း လုပ်ငန်းခွင်ကို စစ်မြေပြင်ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကမ္မဋ္ဌာန်းဟာ ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့ အကြောင်းရင်း ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းနည်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတာကို သိနေဖို့၊ သတိရှိနေဖို့၊ အာရုံစိုက်မိနေဖို့ကိုပဲ အလေးပေးထားတယ်ဆိုတာကို သတိရပါ။ ဒါကို သဘောက်ပေါက်ပါ။ တိုက်ပွဲ မပါဘဲ အသက်ရှူမှုနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်ရမယ်ဆိုတာ နားလည်ထားပါ။
နောက်တစ်ခု ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းနည်းမှာ အရေးကြီးတာက မိနစ်အနည်းငယ်ပဲ ဖြစ်အုံးတော့ ပစ္စုပ္ပန် အခိုက်အတန့်ကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်အောင် ပံ့ပိုးပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အက်ရှူမှုဟာ အမြဲတမ်း ဖြစ်ပေါ်နေတာပဲ။ လောလောဆယ် ဖြစ်ပေါ်နေတာပဲ။ ဒီတော့ မိနစ် အနည်းငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်ရှူမှုကို သတိစိုက်မယ် သိမှတ်မယ်ဆိုရင် အခုလောလောဆယ် ဖြစ်ပေါ်နေတာ၊ ပစ္စုပ္ပန် အခိုက်အတန့်မှာ ရှိနေတာကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ အများအားဖြင့် အတိတ်မှာ လွင့်မျောနေတာ၊ အနာဂတ်မှာ ပျောက်ဆုံးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်ရောက်နေတာလား၊ အနာဂတ်ရောက်နေတာလား မသိနိုင်တဲ့ အခါတောင် ရှိပါတယ်။ ဒီ ကမ္မဋ္ဌာန်းနည်းကတော့ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ရှိနေနိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ မိနစ် အနည်းငယ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
နောက်တစ်ခု အရေးကြီးတာက အသက်ရှုမှုနဲ့ အဆက်အသွယ် ရှိနေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အသက်ရှူမှုနဲ့ကိုယ် ဆက်သွယ်မိမယ့် နည်းလမ်းကတော့ အသက်ရှူမှုကို မိတ်ဆွေအဖြစ် ရှုမြင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ရှူမှုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေ ဖြစ်နေပုံကို ကြည့်ရအောင်။ အသက်ရှူမှုဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အမြဲတမ်း အတူရှိနေတဲ့ မိတ်ဆွေပါ။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အမြဲတမ်း အတူရှိနေနိုင်တဲ့ တစ်ခြားမိတ်ဆွေ မရှိဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် . . . အသက်ရှူမှုဟာ အချိန်တိုင်းမှာ အမြဲတမ်း ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူရှိနေတဲ့ မိတ်ဆွေပါ။ နောက်တစ်ခုက ဒီမိတ်ဆွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အိပ်ပျော်နေတဲ့ အခါမှာတောင်မှာ နိုးထနေပါတယ်။ ကိုယ် အိပ်ပျော်နေတုန်း ကိုယ်နဲ့အတူနေတဲ့ တစ်ခြားမိတ်ဆွေများ ရှိပါသလား။ အသက်ရှူမှုကတော့ ကိုယ် အိပ်ပျော်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် နိုးထနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နဲ့အတူ ရှိနေနိုင်တဲ့ မိတ်ဆွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ ဖြစ်ရသလဲ။ စောစောက ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ပစ္စုပ္ပန် အခိုက်အတန့်ကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်အောင် ကူပံ့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန် အခိုက်အတန့်ကို တွေ့ကြုံခံစားနေချိန်ဟာ လွတ်မြောက်နေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဆက်စပ်နေတာတစ်ခု ရှိပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှား ခံစားမှု ဖြစ်တဲ့အခါ ၀င်လေထွက်လေ မိတ်ဆွေကို သတိရလိုက်တယ်ဆိုရင် စိတ်လှုပ်ရှားမှုကနေ ချက်ချင်းလွတ်မြောက်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်ဆီ ပြန်လာတဲ့ အတွက်ကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှု ကင်းမဲ့တဲ့ ကြားကာလကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို စမ်းကြည့်ပါ။
မနေ့တုန်းက ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေက ပြောပါတယ်။ မီးပွိုင့်မှာ စောင့်နေရင်း သည်းမခံနိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့။ ဒါကို အားလုံး သဘောပေါက်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခင်ဗျားတို့ ချိန်းဆိုမှု တစ်ခုအတွက် နောက်ကျနေပါတယ်ဆိုနေမှ မီးပွိုင့် နီနေတာ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ တော်တော်ဆိုးတဲ့ မီးနီပဲ။ မီးနီတာကို စိတ်ဆိုးနိုင်ပါတယ်။ မီးနီတာကို သည်းမခံနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီ အခြေအနေက ခင်ဗျားတို့အတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခ ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေကို ပြောလိုက်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ဒါမျိုး ကြုံရရင် ဖြေလျှော့ချလိုက်ပါ၊ အသက်ရှူမှုနဲ့အတူ ရှိနေလိုက်ပါလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ စောစောက မီးပွိုင့် နီတာကို မုန်းတီးနေတယ်။ အခု မီးပွိုင့်နီတာကို ကျေးဇူးတင်ရမယ်။ သူ့ကျေးဇူးကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ၀င်လေထွက်လေ မိတ်ဆွေနဲ့ အတူ ရှိနေနိုင်တာကိုး။
ထပ်ပြောလိုက်ပါဦးမယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကြောက်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားရတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ဖန်းတီးတဲ့ မနှစ်သက်စရာ စိတ်ခံစားမှု မှန်သမျှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခါတိုင်း ၀င်လေထွက်လေ မိတ်ဆွေကောင်းကို သတိရလိုက်ပါ။ မိတ်ဆွေကောင်းကို သတိရလိုက်တာနဲ့၊ ၀င်လေထွက်လေနဲ့အတူ ရှိနေလိုက်တာနဲ့ မနှစ်သက်စရာ စိတ်ခံစားမှု ဘယ်လို ဖြစ်သွားပါသလဲ။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ဘာကြောင့် သက်သာရာ ရနိုင်တာလဲ။ အကြောင်းက ရှင်းရှင်းလေးပါ။ ဒီလိုပါ။ စိတ်ခံစားမှု တစ်ခုခု ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်း အဲဒီ ခံစားမှုကို ပိုကြီးလာအောင်၊ ပိုဆိုးလာအောင် လုပ်တာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတွေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှု တစ်ခုခု ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခါမှာ ၀င်လေထွက်လေ မိတ်ဆွေနဲ့ အတူရှိနေလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင် အတွေးတွေ ၀င်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။ မနှစ်သက်စရာ စိတ်ခံစားမှု ချက်ချင်း လျော့သွားပါတယ်။
နောက်တစ်ခု . . . ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ ကူညီနိုင်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချိန်ဟာ ကျွန်တော်တို့ သေလုမျောပါး ဖြစ်နေချိန်ပါ။ ဗုဒ္ဓစာပေမှာ ဆိုထားတာ ရှိပါတယ်။ ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းနည်းကို ကျင့်သုံးတယ်ဆိုရင်၊ အသက်ရှူမှုနဲ့ အတူနေနိုင်အောင် လေ့ကျင့်တယ်ဆိုရင်၊ သေလုမျောပါး ဖြစ်နေချိန်မှာ အသိသတိ ရှိနေမယ်ဆိုရင် အသက်ရှူမှုကို ချက်ချင်းပဲ အာရုံစိုက်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကွယ်လွန်တော့မယ့်လူ အေးအေးဆေးဆေး ဘ၀ကူးနိုင်အောင် ကူညီပေးနေကြတာကို တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ သေလူကို ကူညီတဲ့ နည်းတစ်ခုက အသက်ရှူမှုကို အာရုံစိုက်ခိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ မိတ်ဆွေ ၀င်လေထွက်လေက ကျွန်တော်တို့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေနိုင်အောင်၊ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း သေနိုင်အောင် ကူပံ့ပေးပါတယ်။ တကယ့်ကို တန်ဖိုးမရှိလိုက်ဘူးလား။
Posted by Ashin Acara. at 9:14 PM